भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ ! - Samadarshi Sanchar
भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ !
मिलन लिम्बू, मङ्गलबार, १० चैत, २०७७, बिहानको ०९:४१ बजे
An excavator being used to build the village road at Ghermu VDC, in Lamjung, on Thursday. Photo: THT
गाउँ–गाउँमा ‘भ्याकु’ आतंक । लिम्बूवान क्षेत्रका मानिस स्काभेटरलाई ‘भ्याकु’ भन्छन् । घरमाथिको डिलबाट हिउँदको ६ महिना मात्र गुड्ने मोटरको धुलोले घरआँगन छोपेपछि बोजुको गनगन सुरु हुन्छ । कोठेबारीको तरकारीमा धुलोको असर देखेपछि आमाको गनगन सुरु हुन्छ । मोटरले उडाएको धुलोले घाँसपात जिम्लेपछि बाको गनगन सुरु हुन्छ । त्यैपनि छोरो आँगनमै भटभटे बटार्छन् ! घर–घरमा महँगो मोटरको जोहो छ । उहिले लैना भैंसी, हल गोरु घरका सान थिए, अहिले भटभटे ! फरक यति हो लैनो भैंसीले दूध दिन्थ्यो, भटभटे उल्टै पिउँछ । तैपनि भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ !
भ्याकु गाउँ छिरेपछि छोरी माइत आउँदा आमाका लागि भनेर निख्खुर कोदोको तीनपाने आउन छाड्यो । घर–घरमा चेप्टे सिसीको चाङ लाग्न थालेको छ । सिजङ्वा पिउन छाडेपछि फाल्गुनन्द उपनाम पाएका माइला सुब्बा लर्खराउँदै हिँड्छन् । होइन हौ माइला सुब्बाले छोडेको होइन ? गाउँलेलाई सोध्दा भन्छन्– बियर त अन्नको रस रेन्त ! वेला–वेला बजाउँछन् ! बियरका बोतल वरपर जताततै छरपस्ट भेटिन्छन् । यता लामहिम ठूलीको पैकार चौपट भैसक्यो । निख्खुर कोदोको सिजङ्वा बिक्न छाडिसक्यो । छनुवा बिक्ने कुरै भएन । बरु, वेला–वेला भ्याकुले खनेको बाटो पछ्याउँदै पुलिस पो आइपुग्छन् । अलि–अलि बिक्ला कि भनेर बनाएको तीनपाने लुकाउँदा–लुकाउँदा लामहिम ठूलीलाई हैरान छ । अन्नको रस भनेर बियर पिउने तर निख्खुर कोदोबाट बनाएको तीनपाने नपिउने समय आइसक्यो । तैपनि भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ !
भ्याकु गाउँ छिरेसँगै मकै र भट्टमास भुटेर क¥याम–क¥याम चपाउने दिन सकियो । प्याकेटका तयारी खाजाहरूले गाउँमा आधिपत्य जमाउन थालेपछि खाजाको रूपमा मकै–भट्टमासको युगौँ पुरानो इतिहास ओझेल पर्दै गयो । चिसो भनेकै … नामका व्यापारिक विज्ञापनको प्रभाव व्याप्त छ । अब मही खाएर आनन्दले तिर्खा मेट्ने समय छैन । ज्यामराज चढेर रातो रंगको एलपी ग्यास गाउँ छिरेसँगै घरवरपरका जंगलमा दाउरा कुहिन थाल्यो, बर्खायामभरि पुग्ने दाउरा सञ्चित गर्ने परम्परा हरायो । गाउँ पनि सहरसँगै ग्यास हाहाकार सामना गर्न तयार हुँदै छ ! तोरीबारीमा दुई औंला देखाएर फोटो खिच्ने दिन अब छैन । प्याकेटको सनफ्लावरले तोरीबारी विस्थापित भयो । टुकटुके मिलको आवाज सुन्न छोडियो । ठेकी र मदानीको घुर–घुरसँगै नौनी घ्यूको त्यो स्वाद पनि हरायो । अब घ्यूले भुटुनको मान्यता नै गुमायो । आत्मनिर्भर गाउँले विकासको नाममा परनिर्भरताको बाटो समात्यो । तैपनि भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ !
चिहानसँग के रिस थियो कुन्नि, लाखौँलाख चिहान भ्याकुले उधिनेर सत्यानाश ग¥यो । चिहान सभ्यता हो । तर, मोटर चढ्ने नाममा सभ्यता पनि जुवा हानियो । तर पनि भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ !
सिरान डाँडाबाट भ्याकु मालिकले आँखा चिम्लेर गाउँ हेरेपछि नजर लाग्यो क्यारे ! सिमे–भूमे रिसाउँदा गाउँमा आजकाल ठुल्ठूला पहिरो जान थालेको छ । भ्याकु गुरुजीको इन्जिनियरिङमा खनिएको मोटर बाटो पहिरोको कारण बनेको छ । गाउँभरका भाले खाँदै भ्याकुगुरुले बल लगाएर जथाभावी भ्याकु चलाउँदा थर्किएर ढुंगामाटोको सम्बन्धमा फाटो आउँदा पहिरो जान सहज भएको छ । हिउँदमा धुलो उडाउँदै मोटर गुड्ने बाटो बर्खायाममा गाउँभरका भेलबाढी बग्ने बाटो बनेको छ । दक्ष इन्जिनियरसहित अन्य प्राविधिक प्रयोग गरेर बाटो खनिएको भए आज सुविधाको नाममा सास्ती खेप्नुपर्ने पक्कै थिएन । गाउँलेको बर्खायाम पहिरोको पिरलोमा बित्न थालेको छ । तर पनि भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ !
धर्ती हल्लाउँदै भ्याकु गाउँ–गाउँ छिरेपछि पानीको मुहान क्षेत्रका वन अनियन्त्रित रूपमा मासिए । युगौँदेखि बाह्रै महिना पानी आउने मुहानहरू सुक्न थाले । कहिल्यै पानीको संकट नभोगेका गाउँबस्ती संकट भोग्दै छन् । पानीको मुहानवरपर अनियन्त्रित रूपमा यन्त्र प्रयोग गर्दा उत्पन्न कम्पन र अन्य गतिविधिले पानीको प्राकृतिक रुटमा असर परेपछि सहतसम्म पानी आउन छोड्यो । भ्याकु पुग्न बाँकी गाउँहरूमा संकट निकट छ । गाउँमा मोटर गुडाउने चाहमा भ्याकुगुरुलाई मनपरी खन्न लगाउँदा पानीको मुहानमा असर पर्यो । त्यसैले पानी संकट सुरु भयो । यस्तै चाला हो भने सन्ते साहुजीले घर–घरमा पानीको जार सप्लाई गर्ने दिन टाढा छैन । तर पनि भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ !
गाउँमा भ्याकु छिरेपछि आस्थाका धरोहर मासिए । युगौँदेखि साकेला नाच्ने थानहरूमा भ्याकु नाच्यो, त्यसपछि मोटरहरू नाचिरहेका छन् । युगौँ पहिले भएका घटनाहरूको साक्षी मानिएका ढुंगाहरू भ्याकुले उधिनेपछि सभ्यता संकटमा प¥यो । लाखौँ फलैँचाहरू मोटर चढ्ने नाममा मासिए । फलैँचाहरूसँगै पितापुर्खाको सम्झना हरायो । चिहानसँग के रिस थियो कुन्नि लाखौँलाख चिहान भ्याकुले उधिनेर सत्यानाश ग¥यो । चिहान सभ्यता हो । तर, मोटर चढ्ने नाममा सभ्यता पनि जुवा हानियो । तर पनि भ्याकु गाउँ छिरेपछि आनन्द छ !
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ! सुन्दा पनि गज्जब नै लाग्छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्नुको अर्थ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्नु हो । आशय गलत थिएन । तर, सिंहदरबारको चरित्र सर्लक्कै गाउँ–गाउँ पुग्नुचाहिँ अभिशाप नै भयो । देश संघीय संरचनामा गएपछि गाउँ सरकारहरू बनेका छन् । तर, गाउँपालिकाहरू पनि सिंहदरबार जस्तै छन् । गाउँ सरकारहरूले पनि बुझेको विकास भनेको भ्याकु लगाएर डाँडाकाँडा चिरा–चिरा पार्नु मात्र हो !
सिंहदरबारले विकासको नाममा जसरी काठमाडौं उपत्यकावासी नेवार समुदायको उपगमहरूमा भ्याकु चलायो, त्यसरी नै गाउँ–गाउँका सिंहदरबारहरू पनि विभिन्न जाति र समुदायको उपगमहरूमा भ्याकु चलाउँदै छन् । सिंहदरबारले राज्य संरक्षित समुदायको आस्थाका सम्पदाहरूलाई संरक्षण गरेर अरूको सांस्कृतिक आस्थाहरूमा जसरी भ्याकु चलायो, गाउँ गाउँको सिंहदरबारले त्यसै गर्दै छन् । घाट र चिहान, मन्दिर र मस्जिदजस्तै अरू धेरै कुरामा सिंहदरबारको नजर जस्तो थियो, गाउँ–गाउँ पुगेको सिंहदरबारको नजर पनि उस्तै छ । घाट संरक्षणमा माटो थुपार्ने भ्याकु नै चिहान भत्काउन माटो उधिन्छ ! भ्याकु गाउँ नछिर्दासम्म सबैको व्यथा उस्तै थियो । तर, भ्याकु गाउँ छिरेपछि सिंहदरबारको चरित्रले सबैको व्यथा धार्मिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै आस्थाका आधारमा बेग्ला–बेग्लै बनाइदियो । विभेदकारी सिंहदरबारको चरित्र सर्लक्कै गाउँ–गाउँको सिंहदरबारमा सरेको छ ।
भौतिक विकासबारे अहिलेको अवधारणाले लक्षित वर्गमा असीमित सुविधा पु¥याएको जस्तो देखाउँछ । तर, जति सुविधा पुगेको छ, त्योभन्दा धेरै सास्ती थपेको छ । यसको प्रभाव झट्ट देखिँदैन तर कालान्तरमा घातक सावित हुन्छ । जति विकास भयो, त्योभन्दा धेरै विनाश भएको छ । गाउँमा मोटरबाटो पुग्नु गलत थिएन । तर, भ्याकुगुरुको इन्जिनियरिङमा जताततै चिरा–चिरा पार्नु गलत थियो । भौतिक विकासप्रति राज्य गम्भीर र जिम्मेवार भएको भए योजनाबद्ध रूपमा भौतिक विकासको आधार मानिएको सडक, बिजुली, खानेपानीलगायत काम हुने थियो । तर, राज्य कहिल्यै पनि गम्भीर हुन सकेन । विकासको अथाह सपना देखाएर राज्य बेखबर रहँदा नागरिकको सपना ओइलाएन, झनै मौलायो । चाह पूरा हुन्छ भने भ्याकुगुरुको इन्जिनियरिङ नै ठीक । गाउँमा मोटर गुडाउने नै हो !
आफूलाई भौतिकवादी भन्नेहरू देश हाँक्दै छन् । उनीहरूको मान्यता– ‘ध्वंस नभई निर्माण हुँदैन !’ तर, यो उक्ति खारेज गर्नुपर्छ । भौतिकवादले भौतिक विकास र विनाशलाई पर्यायवाची मान्दैन । अब ‘ध्वंस नगरी पनि निर्माण सम्भव छ !’ भन्नुपर्छ । भएका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित ऐतिहासिक संरचनालाई जोगाएर पनि भौतिक विकास सम्भव छ । त्यसका लागि विकासप्रतिको अवधारणा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । विकास गर्ने बहानामा विध्वंस गरेर विकास चाहने नेपाली नागरिकको भावनामा खेलबाड गर्नु गम्भीर धोका हो । विकासप्रति अहिलेको अवधारणाले विकासको नाममा धोका दिँदै छ । भौतिक विकासको नाममा जारी विनाश अन्त्य हुनुपर्छ ।
अहिलेको विकासे अवधारणाले विनाश गर्न मात्र सिकाउँछ । आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतामा धकेल्छ । आफूसँग भएको वस्तुलाई मूल्यहीन मानेर सुविधाको नाममा अरूबाट उत्पादित वस्तुलाई मूल्यवान् सावित गराउन अहिलेको विकास प्रणालीले भूमिका खेल्छ । गाउँमा उपलब्ध कच्चापदार्थको प्रयोगमा युगौँदेखि उत्पादन हुँदै आएका वस्तुहरू यो अवधारणामा अस्वीकृत छन् । र, आवश्यकता पूर्ति गर्न आयातित वस्तुहरूमा मानिसलाई निर्भर हुन बाध्य तुल्याउँछ । विकास भनेको सडक, बिजुली र खानेपानी मात्र हो भन्ने गलत मानक स्थापित भएको छ । समग्रमा भन्दा अहिलेको ‘भ्याकु विकास’ अवधारणाले आफ्नो अस्तित्व गुमाएर अरूको नक्कल गर्दै बाँच्न सिकाउँदै छ । जय भ्याकु
साभार स्रोत nayapatrikadaily.com